Karaiba · Jona, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Karaiba · Jona, 2013
Tantara mikasika ny Karaiba tamin'ny Jona, 2013
Miara-manoratra Hira i Julian Assange, Calle 13, Sy Ireo Mpampiasa Twitter
Amerika Latina 30 Jona 2013
René Pérez, fantatra hoe "Residente" avy amin'ny tarika Calle 13 — tarika iray izay manohitra ny karazana ankolafy —, sy Julian Assange, mpamorona ny Wikileaks, dia nanangona ireo hevitra sy sosokevitra avy amin'ireo mpampiasa Twitter mba hanoratra hira miaraka izay hampidirina ao amin'ny rakikiran'ny Calle 13 manaraka
Hamongotra Ny Andiana Fifindra-monina Vaovao Ve Ny Breziliana?
Brezila 30 Jona 2013
Mitarika andiana fifindra-monina any Brezila ny krizy ara-bola maneran-tany, ady ary ireo hetraketraky ny tontolo iainana. Ny fampiroboroboana ireo politikan'ny fifindramonina mahomby, noho izany, dia mitondra fandraisan'anjara amin'ny lazan'i Brezila ho tanjaka maneran-tany vao misondrotra.
Mampiely Ny Fahazoana Miditra Aterineto i Kiobà Amin'ny Alalan'ny Fametrahana Ivon-tSerasera
Amerika Latina 26 Jona 2013
Nanokatra efitrano hidirana aterineto 118 i Kiobà, ho anisan'ny ezaka hampitomboana ivon-tserasera ao amin'ny nosy. Azo ampiasaina any amin'ny biraom-barotry ny orinasam-pifandraisandavi-pirenena (ETECSA) rehetra manana ny iray amin'ireny efitrano ireny ny tolotra Nauta.
Nampitomboin'ny Kiobà Ny Fahafahana Midira Aterineto Avy Amin'ireo Ivontoerana Natao Ho An'ny Daholobe
Amerika Latina 24 Jona 2013
Nanokatra Ivontoerana 118 hahafahana mampitombo ny fidirana Aterineto ao amin'ny Nosiny i Kioba. Antsoina hoe Nauta, ilay tolotra dia azo anontaniana eny amin'izay solotena ara-barotry ny Sampan-draharaha Kiobàna misahana ny serasera (ETECSA) izay miara-miasa amin'ilay fandaharanasa.
Trinidad & Tobago : Izay Mety No Ataovy
Trinite sy Tobago 17 Jona 2013
Na ahoana na ahoana no tianao hamaritana azy - ny foto-kevitra, ny fitsipika moraly, ny toetra - no mamehy ny fitsipi-pitondrantena amin'ny fanaovana izay mety. Miaraka amin'ny fitsingidingidinan'i Trinidad sy Tobago ho any amin'ny laharana faha-80 amin'ny Fandaharan'ny Transparency International tamin'ny taona 2012 mikasika ny Fomba fahitàny ny Kolikoly, bilaogera vitsivitsy avy ao an-toerana no nifanakalo hevitra momba ny resaka fahamendrehana.
Pôrto Rikô : Miroborobo Ny Tetikasa Tsy Miankina Firaisankina Ara-Ekolojika
Amerika Latina 08 Jona 2013
Miha-mafy orina isan'andro ny firaisankina hiaro tontolo iainana any Portô Rikô, noho ireo olona miasa mafy mba hampivoarana ny tetikasa tsy miankina. Ireto misy ohatra vitsivitsy hanamafisana indray hoe ny tanjona ho fiarovana ny zava-boahary, ny fambolena vokatra tsy misy poizina ary ny ady amin'ny faharetan'ny fambolena dia tsy nofy tsy ho to akory.